Ambassador Iyo Shaqada Uu Qabto. W/Q: Rashiid Odowaa
Wednesday March 13, 2019 - 11:21:36 in Articles by Hadhwanaag News
wakiil ama Ambassador waa sarkaalka ugu darajo sarreeya xagga diplomasiyadda waxa uu waddan si sharci ah ugu diri karaa
"1984 ayay ahayd markii dad libiya u dhashay oo ka soo horjeeda Xukunka Muamar Al-Qaddafi ay Safaaradda London ee Libya aya Mudahaaraad la hor yimaadeen iyagoo sitta Boodhah ay ku qoranyihiin hal ku dhegyo,ay kaga soo hor jeedan xukunka Qaddafi,dadka oo u badnaa Arday iyo dad kale,Waxa safaaradda libiya gedeheeda laga soo Furay Rasaas Machine Gun iyo pastoolado,waxa vhalkaas ku dhimatay Gabadh Police Ingriis ahayd oo waliba ka celinaysay dadka mudahaaraadaya inay Safaaradda u soo dhowaadan,Waxa kaloo halkaas ku dhaawacmay 10 qof oo dadkii dibad baxa Samaeeyay ah,Sidaas ool ay tahay Haddana Cid safaaradda Albaabkeeda istaagtay ma jirto iskaba daa in la galo e waxase aad u xumaaday Xidhiidhkii labada dal Waa UK iyo Libya”.
Markay sidaas tahay ee dhowsoonaanta intaa leeg la siiyay safaaradaha iyo Diplomasiyinta ka shaqeeyaba,waxad halkaas ka garan kartaa in Qofkan diplomaciga ah aan isagana laga ogolayn inuu soo dhaafo xayndaabka sharci oo uu faro geliyo waddankan uu joogo arrimiiisa oo dhan Gudo iyo dibadba,Hase ahaatee Qaabka uu howshiisa u gudanayo,Sida uu ku helayo Xogaha uu la wadaagayo Dalkiisii waa hab la isla ogolyahay oo qeexan waxayna leedahay dariiqooyin loo maro.
1-Marka ugu horraysa waxa uu yahay calaamad u taagan waddankaas uu ka yimid,waxa kaloo uu wakiil ka yahay Madaxweynaha wadankaas soo dirsaday dabcan waa muraayadda laga daawan karo waddankaas soo dirsaday (Sending state) haddii shakhsigan Diplomasiga ahi uu fiicanyahay dalkii uu ka yimidna wuu fiicanyahay,haddii shakhsigani uu Xunyahay dabcan waddankii soo Xulay maxaad u malayn ayaa la is waydiin karaa.
4-Waxa uu xidhiidhiyaa sidii ay u qaybsan lahaayeen labadan waddan wixii horumar dhaqaale iyo xaddaarad bal eh,waxa kaloo uu ka shaqaynayaa sidii labada waddan ay isu dhaafsaan lahaayeen wixii xog ah eek u saabasan labada dhinac.
6-Waxa uu ka sheqeeyaa Danaha iyo xidhiidhka labada waddan,waxa uuna kobciyaa heshiisyada iyo axdiyada ka dhexeeya labadan waddan,waxa uu soo gudbiyaa akhbaarta hadday tahay ganacsi,horumar,Siyaasad IWM.
7-Diplomasigu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo wararka ja jira waddankan uu safiirka ka yahay,xattaa haddii waddankan qof lagu dilo waa inuu helaa si uu waddankiis ugu gudbiyo una sheego in maanta Dil ka dhacay waddankaas uu shaqada u joogo,Sidaas darteed waa inuu helaa nooc kasta oo warbaahineed oo dalkaas ka jirta Subax kasta,hadday tahay TV.Radio,iyo wargeysyadaba.
8-Safiirka Waxa u jooga magaalooyinka kale ee aan ahayn Caasimadda Qunsuliyado isaga uga wakiil ah oo halkaas kala shaqaynaya xafiis kastana waxa u jooga sarkaal diplomasi ah iyo Howlwadeenadiisa.
Intan oo keliya laguma koobi karo shaqada diplomasiga.